Kitendry feno eo amin'ny efijery vaovao an'ny Apple Watch Series 7 | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo ampahany tsara amin'ny fisian'ny efijery lehibe kokoa amin'ny Apple Watch ny famelana antsika hankafy ny kitendry feno amin'ny famantaranandro. Ity safidy ity dia tsy ho vita raha tsy mitombo ny efijery tratran'i Apple ary izany dia amin'ny maodely amin'izao fotoana izao dia tsy manana ny fitendry fitendry feno hotendreny isika fa ampiharina amin'ireo maodely vaovao ireo.
Ny efijery lehibe kokoa dia manohana lahatsoratra 50% bebe kokoa araka ny aseho amin'ny fampisehoana, zavatra izay tsy isalasalana fa hankasitraka ireo mpampiasa izay mahazo hafatra an-tsoratra na mailaka maro. Raha fintinina, ny zava-dehibe eto dia ny haben'ny ankapobeny amin'ny takelaka fiambenana sy ny napetrany dia tsy mampitombo saika na inona na inona, ny mitombo dia ny écran.
Ny kitendry dia mamela anao hampiasa ny asan'ny Quickpath
Ampian'izy ireo koa ny safidy nantsoin'i Apple ho Quickpath, izay tsy inona fa ny safidinao amin'ny fanoratana amin'ny alàlan'ny fitetezana ny fitendry. Ny antsipiriany iray hafa mahaliana dia ity fiasa manokana manokana an'ny Series 7 ity izay mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy hianarana teny ary noho izany isaky ny mampiasa azy ianao dia ho mora kokoa ny manoratra amin'ny fivezivezena, toy ny iPhone ankehitriny ihany.
Miaraka amin'ity efijery vaovao lehibe kokoa ity izay manomboka amin'ny 41mm ka hatramin'ny 45mm amin'ilay maodely lehibe kokoa dia tsy ho lany na inona na inona isika hanoratantsika ireo litera na dia manana rantsantanana lehibe aza isika. Ny bokotra hifaneraserana sy ny interface amin'ny ankapobeny dia nohavaozina ihany koa mba hampiasaina amin'ity famantaranandro vaovao ity izay mbola miandry ny hamandrika isika. Voalaza fa mety ho tara io fararano io na dia tsy misy na inona na inona nohamafisin'i Apple ka ho tonga ny fotoana hanohizana miandry amin'ity lafiny ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Kitendry feno eo amin'ny efijery vaovao an'ny Apple Watch Series 7
Efa azo atao izany amin'ny fampiharana ivelany, nopetahan'izy ireo izany ary ampidirin'izy ireo irery ho an'ny famantaranandro fotsiny.